ओली-दाहाल स्वार्थमा रुमलिँदै सभामुख पद | Suvadin !
ओली-दाहाल स्वार्थमा रुमलिँदै सभामुख पद
प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनको विषय निकै अन्योलमा परेको छ । पूर्व सभामुख कृष्ण महरालाई महिलामाथी यौन दूर्व्यवहारको अभियोग लागेपछि तीन महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुखको पद नेकपाको पार्टी भित्रकै राजनीतिक स्वार्थका कारण अन्यौलमा परेको छ ।
Jan 13, 2020 16:26
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनको विषय निकै अन्योलमा परेको छ । पूर्व सभामुख कृष्ण महरालाई महिलामाथी यौन दूर्व्यवहारको अभियोग लागेपछि तीन महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुखको पद नेकपाको पार्टी भित्रकै राजनीतिक स्वार्थका कारण अन्यौलमा परेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व एमाले र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पूर्व नेकपा माओबादी खेमाबाट सभामुख बनाउने दाउमा छन् । महराबाट सहयोग महशुस गरेका ओलीले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेगरी आफूले चाहेको पात्रलाई नै सभामुख बनाउन चाहेका छन् ।
उता पूर्व माओवादी खेमाबाट सभामुख नछोड्न प्रचण्डलाई कार्यकर्ताको दवाव छ । बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसकेपछि सभामुख चयनबारे कुनै छलफल हुन सकेन । तर, बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय भने गर्‍यो ।
उक्त निर्णयबाट उपसभामुख तुम्बाहाम्फे पार्टीसँग रुष्ट बनेकी छन् । आफू कुनै कुरामा असक्षम नहुँदा पनि पार्टीले आफूलाई नै सभामुख दिनुपर्नेमा पाखा लगाउन खोजेको उनको आक्रोस छ । हुन पनि हो । महराले गल्ति गरे होलान् । त्यसको सजाए किन उपसभामुखले पाउने ? व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लोकतन्‍त्रमा कसैलाई विनाअर्थ दु:ख दिनु कत्तिको सहि हो भन्न‍े तर्क पनि हुन थालेको छ ।
शनिबारको बैठकमा ओली मिर्गौलाको डायलासिस गराएर आराम गरिरहेका कारण उपस्थित नभएका हुन् । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले ओलीकै सहमतिमा उपभामुखलाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपाले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिन पनि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । उपसभामुख पदबाट उनले राजीनामा नदिए नेकपाले सभामुख पद गुमाउन सक्छ । संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्छ ।
तुम्बाहाङ्फे पनि पदबाट राजिनामा नदिने अडानमा छन् । तुम्बाहाम्फेले शुक्रबार साँझ दुवै अध्यक्षलाई भेटेर आफ्नो धारणा राखेकी छन् । उनको पदबाट राजिनामा नदिने अडानका कारण नेकपा थप अप्ठ्यारोमा छ । तुम्बाहाङ्फले आफूलाई शनिबारको पार्टी निर्णय थाहा नभएको बताएकी छन् । उनले तुम्बाहाङ्फेले सभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएकी छिन् ।
उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको गल्तीको सजाय आफूले किन पाउने भन्ने प्रश्न गर्दै आएकी छिन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई अन्योलमा राख्नु हुँदैन । हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुन पाउनु पर्छ ।